Football Khabar » फ्यानहरूसँग किन रिसाए जोर्डी अल्बा ?
फ्यानहरूसँग किन रिसाए जोर्डी अल्बा ?
स्पेनिस बार्सिलोना तीन साताको बीचमा युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे फुटबलबाट आउट भएपछि खेलाडीहरू निराशामा डुबे । त्योभन्दा बढी फ्यानहरूमा असन्तुष्टि र निराशा बढ्यो ।
विश्वभरिका फ्यानहरूको ठूलो हिस्सा केही खेलाडी र प्रशिक्षकमाथि खनिए । उनीहरूले केही खेलाडी र प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेलाई बिदा गर्नुपर्नेसम्मका माग राखे ।
तर, फ्यानहरूको यस्तो व्यवहारबाट लेफ्ट ब्याक जोर्डी अल्बा रिसाएका छन् । उनले फ्यानहरूले पीडामा रहेका खेलाडीहरूको भावना नबुझेको भन्दै असन्तुष्टि राखेका हुन् ।
‘हामी मात्रै हैन, कोही पनि हार्न चाहँदैन । लगातार दुई ठूला उपाधि हार्नु बार्सिलोनाजस्तो क्लबका लागि नसुहाउने कुरा हो । तर, हामी सधैं जित्न चाहन्छौं । यसपटक पनि हामीले सबै उपाधि जित्न चाहेका थियौं,’ अल्बाले भने, ‘तर, हामी असफल भयौं । हामी क्षमायोग्य छैनौं ।’
अल्बाले फ्यानहरूको रुखो व्यवहारबाट नराम्रो लागेको पनि बताए । ‘एक–दुई हारले हाम्रा विगतमा हाम्रा सफलताका सिजन बिर्सनु हुँदैन । यो बेला फ्यानहरूले जस्तो प्रक्रिया दिइरहनुभएको छ, त्यो स्वभाविक छ । उहाँहरूलाई यो हक छ,’ अल्बाले भने, ‘तर, हामी पनि पीडामा छौं । बार्सिलोनाको करिअरमा मेरा लागि यो सबैभन्दा पीडादायी सिजन रह्यो ।’
बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगमा लिभरपुलसँग ४–० ले हारेर आउट हुादा अल्बाले खराब प्रदर्शन गरेका थिए । पछि उनी फ्यानहरूको निशानामा परेका थिए ।
प्रकाशित मिति १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०४:२२